अमेरिकामा लुटेरा र बन्दुक हिंसामा पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दो - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
अमेरिकामा लुटेरा र बन्दुक हिंसामा पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दो
गोली प्रहारबाट घाइते भएकी रचना श्रेष्ठ अस्पतालमा उपचार गराउँदै । जुलाई २४ ओक्लोहमास्थित बडिज ह्याण्डी मार्ट ग्यास स्टेसन’मा काम गरिरहेका बेला दिउँसो सवा १२ बजे श्रेष्ठमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो ।
आफन्त गुमाएको परिवारको बिचल्ली
न्यूयोर्क । एक महिनाअघि भर्जिनियाको हेरन्डनस्थित फ्रेक्लिन फार्मको ‘सुनोको ग्यास स्टेसन’मा काम गरिरहेका ४० वर्षीय रेशम बजगाईंको हत्या भयो । लुटेराहरुको समूहले बजगाईंलाई कुटपिट गरी टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । ६ वर्षकी छोरी र श्रीमतीसँगै उनी अमेरिका आएको ९ महिना मात्रै भएको थियो ।
भर्जिनियाको यो घटना सेलाउन नपाउँदै गत जुलाई २४ (एक साता अघि)मा ओक्लोहमा राज्यको एक ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेकी नेपाली युवती रचना श्रेष्ठमाथि गोली प्रहार भयो । स्थानीय ‘बडिज ह्याण्डी मार्ट ग्यास स्टेसन’मा दिउँसो सवा १२ बजे कालो वर्णको एक लुटेरा आएर अन्धाधुन्द बन्दुक चलाउँदा उनको शरीरका विभिन्न अंगमा ८ वटा गोली लाग्यो । उनको पिठ्यु, पाखुरा, गाला, पेट, कम्मर र मुटुको तल्लो भागमा गोली लागेको थियो । हाल उनको ओक्लोहमा शहरकै टल्सा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । स्वास्थ्यमा केही सुधार भए पनि ६ वटा मात्र गोली निकाल्न सकिएको छ । साढे दुई वर्षको छोरा र श्रीमान्सहित उनी पनि ११ महिना अघि मात्रै अमेरिका आएकी हुन् ।
गत जनवरीमा टेक्सासको ब्रोड वे ब्लुबर्ड नजिकैको ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेका ३५ वर्षीय मनिष पाण्डेको हत्या भएको थियो । मध्यराति स्टोरमा काम गरिरहेका बेला लुटेराहरु छिरेर उनीमाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका थिए ।
सन् २०१८ लागेपछि मात्र अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपालीमाथि भएका जघन्य हिंसाका घटना हुन् यी । त्यसबाहेक विशेषगरी ग्यास स्टेसन र स्टोरमा काम गर्नेले सामान्य गालीगलौज त नियमित खेपिरहेका हुन्छन् । यस्तो हिंसाको चपेटामा पर्नेमा नेपाली मात्र छैनन् । प्रायः सबै गरिब र न्यून आय भएका मुलुकबाट आएका आप्रवासीहरुको नियती हो यो । अमेरिकामा काम नगरी बाँच्न सम्भव नहुने भएकाले भर्खरै आएकाहरु, अन्य सीप नभएका र अंग्रेजी भाषाको राम्रो दख्खल नभएकाहरु ग्यास स्टेसन तथा स्टोरहरुमा नै काम गर्न बाध्य हुन्छन् । तुलनात्मक रुपमा बढी जोखिम पनि त्यही क्षेत्रमा छ । अमेरिकामा ग्यास स्टेसनमा पेट्रोल, डिजेल अलावा चिया, कफी, चिसो पेय पदार्थ, चुरोट, सामान्य खाजा, एवम् एटीएम मेसिन लगायतका सुविधासहितको स्टोर हुने गर्छ ।
आफ्नो र परिवारको उज्यालो भविष्यको सपना बोकेर दुनियाँको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुक अमेरिका आउनेहरुको जिन्दगी हिंसाका घटनाले उजाड बनाइदिने क्रम बढ्नुलाई यहाँको प्रशासनले प्रमुख चुनौतीका रुपमा लिएको छ । विशेषगरी साना नानी लिएर आएका दम्पतीमध्ये एकको हिंसामा परेर मृत्यु भए त्यो परिवारको संघर्ष र दुःख बयान गरिनसक्नुहुन्छ । छोराछोरी साना हुनेहरुले अमेरिकामा पालो गरेर बच्चा हेर्ने र काम गर्ने गर्छन् । श्रीमान् काम सकेर फर्किएपछि बालबच्चा जिम्मा लगाएर श्रीमती काममा निस्किन्छिन् । यसरी चलिरहेको परिवारमा एक जनालाई केही हुनेबित्तिकै अर्को व्यक्ति पनि काममा जानै सक्दैन । महँगो शुल्कका कारण छोराछोरीलाई ‘डे केयर सेन्टर’मा राखेर काम गर्न पनि सकिंदैन । परिवारको दैनिक गुजारामै गम्भीर आर्थिक समस्या आइलाग्छ ।
नेपालमा यस्ता हिंसापीडितले राज्यबाट सहयोग पाउने गरे पनि अमेरिकामा यस्तो ठोस प्रावधान छैन । ‘कुनै दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएमा अमेरिकी सरकारले यति रकम क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने कुनै प्रावधान छैन । प्रत्येक घटनाको प्रकृति हेरेर थोरै केही सुविधा दिन सक्छ । तर, त्यो लिन पनि सहज छैन,’ भर्जिनिया र ओक्लोहका घटनापीडितलाई सहयोग जुटाउन सक्रिय सञ्चारकर्मी गुणराज लुइँटेलले भने । मृतकको काम अस्थायी वा स्थायी भन्ने कुराले निकै फरक पार्छ । घटनाको प्रकृति कस्तो छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन्छ । स्थानीय प्रहरी प्रसाशन, काउन्टी र सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको अवस्था ठहर भए मृतक परिवारलाई काजक्रियाका लागि निशुल्क ठाउँ उपलब्ध गराउने, कतिपय अवस्थामा न्यूनतम काजक्रिया खर्चसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको लुइँटेलले जानकारी दिए ।
‘तर, ती सुविधा लिन निकै मुस्किल छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छे गुमाएको पीडामा छट्पटाइरहेको अवस्थामा फलानो ‘पेपर साइन’ गर, फलानो कागज तयार गर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । धेरै किसिमका कागजात जुटाउनुपर्ने र धेरै पहल गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश पीडित परिवारले यस्तो सुविधा लिनै सक्दैनन् । भर्जिनियाको घटनामा पनि मृतक परिवारले राज्यबाट केही पाएका छैनन् ।’
कानुन व्यवसायीको सहयोग लिएर बजगाईंको परिवारलाई सरकारी राहत जुटाउन थप पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । भर्जिनिया घटनामा मृतकले उक्त ग्यास स्टेसनमा साताको एक दिन मात्रै ‘पार्ट टाइम’ काम गर्ने भएकाले रोजगारदाताबाट सामान्य क्षतिपूर्ति पाउन पनि अप्ठेरो परेको छ । मृतकले फूलटाइम काम गर्ने अर्को कम्पनीले घटना आफ्नो पेरिफेरिमा नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्दै आएको लुइँटेलले बताए ।
गम्भीर हिंसाको घटनामा परेर बाँच्न सफल भाग्यमानीमा पर्छिन् २४ वर्षीय ज्वाला कार्की । आठ महिना अघि टेक्सासको अर्भिङमा उनलाई आफू बस्ने घरकै तल कपडा धुने (लण्ड्री रुम) ठाउँमा फोन र पर्स माग्दै १५ वर्षे युवकले गोली हानेका थिए । सात वटा गोली लागेकी कार्कीको फोक्सो र पेटबाट गोली निकाल्न छातीदेखि नाइटोभन्दा तलसम्म चिरेर लामो शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो ।
मृतकको सवालमा परिवारलाई अमेरिकी सरकारले कुनै ठूलो राहत नदिए पनि घाइतेको निशुल्क उपचार र काम गर्न जान नसकेको अवधि बराबरको क्षतिपूर्ति भने दिने अर्का सञ्चारकर्मी रामचन्द्र भट्टको अनुभव छ । उनी आफैं सन् २०१४ मा ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेका बेला लुटेराहरुको कुटपिटबाट मरणासन्न अवस्थामा पुगेका थिए । ‘विशेषगरी नगद (क्यास)मा कारोबार गर्ने स्टोर, पसल र ग्यास स्टेसनहरुमा यस्ता किसिमका घटना भइरहन्छन् । नेपालीपीडित भएको घटना हामीले छिटो सुन्ने भएकाले नेपालीहरु बढी परिरहेका छन् कि भन्ने लागेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार यस्ताखाले घटनामा काम गर्ने व्यक्ति आफैं सचेत हुनु जरुरी छ ।
यस्ता ठाउँमा काम गर्न जानुअघि त्यो स्टोर कस्तो ठाउँमा छ ? काउन्टर बुलेट पु्रफ सिसाले बारेको छ कि छैन ? स्टोरमा मान्छेको कत्तिको चहलपहल हुन्छ ? पसल वरपरको सुरक्षा के–कस्तो छ ? भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक हुने उनको सुझाव छ । काम गर्दा सधैं चनाखो रहनुपर्ने, रजिस्टर (काउन्टर)मा सकेसम्म कम पैसा राख्ने, लुटेरा लुट्न आएमा कहिल्यै प्रतिकार नगर्ने, प्रहरीलाई फोन नगर्ने, बरु हाँसेर ‘मलाई केही नगर सबै लैजा’ भनिदिने जस्ता व्यवहार गर्दा तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम हुने उनी बताउँछन् । पसलका सामान एवम् नगदको बीमा हुने हुँदा साहुलाई लुटिएका कारण साहु पनि घाटामा नपर्ने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकामा १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सहजै बन्दुक किन्न सक्ने भएका कारण त्यसको दुरुपयोगमा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका हुन् । लुटेरा एवम् हिंसाविरुद्धको कारबाहीलाई अमेरिकी प्रहरीले प्राथमिकतामा राखे पनि तिनको जोखिम घटेको छैन । अमेरिकामा प्रहरी कारबाहीमा यस्ता लुटेरा पक्राउ पर्ने र सर्वसाधारण मारिने घटना पनि निरन्तर भइरहन्छन् । टेक्सास जस्ता यस्ता घटना बढी हुने राज्यमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूती प्रमुख राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
अमेरिकामा बन्दुक हिंसा र लुटेराको आक्रमणबाट कति नेपालीको हत्या भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । सन् २०१५ जुनमा टेक्सासमा आफैं स्टोर सञ्चालन गरिरहेकी व्यवसायी समिरा शिवाकोटीलाई काम गरिरहेकै अवस्थामा लुटेराहरुले गोली हानेका थिए । श्रीमतीको मृत्युपछि बिचलित बनेका ३८ वर्षे श्रीमान् नवराज शिवाकोटीले एक वर्षपछि आत्महत्या गरेका थिए । बाबु–आमा दुबैको मृत्यु भएपछि अमेरिकामा हुर्किरहेका साना दुई छोरीहरु टुहुरा भए । सन् २०१५ कै जुलाई २१ मा अर्का एक नेपालीको पनि हत्या भएको थियो । भुटानी शरणार्थीको रुपमा अमेरिका आएका जीत मगरको मिस्क्वाइट टेक्सासको ग्यास स्टेसन बाहिर हत्या गरिएको थियो । जुन २०१२ मा डेक्लाब काउन्टी जर्जियामा ३९ वर्षीया दामोदर पाठकको ग्यास स्टेसनमा हत्या भएको थियो । त्यसअघि सन् २०१३ फेब्रुअरीमा न्यूजर्सीका बालकृष्ण कार्कीको हत्या भएको थियो ।